Iphothifoliyo ye-Adobe: Yakha Ubambe Iphothifoliyo Yakho eku-inthanethi | Martech Zone
Iphothifoliyo ye-Adobe: Yakha futhi Ubambe Iphothifoliyo Yakho eku-inthanethi
ISonto, Ephreli 24, 2016 ISonto, Ephreli 24, 2016 Douglas Karr
I-Adobe ikhahlela umdlalo wabo we-inthanethi phezulu. Kade sisebenzisa i-Creative Cloud iminyaka embalwa manje futhi sizithola sisebenzisa ubuchwepheshe be-Adobe ngokwengeziwe. Manje i-Adobe yethule eyayo Portfolio indawo, isisombululo esifanele sezithameli zayo ezibhekiswe kubaklami nama-ejensi. Ngaphezu kokusebenzisa igama lakho lesizinda, umhleli wePortfolio ka-Adobe unikela ngezici ezilandelayo:
Ngaphezu kokusebenzisa igama lakho lesizinda, Iphothifoliyo ye-Adobe inikeza izici ezilandelayo:
Ukufinyelela Typekit's umtapo wolwazi wamafonti.
Ukuhlela okubukhoma kukuvumela ubone izinguquko zakho njengoba uzenza.
Ukufinyelela okuqondile: Noma yini ongayibona, ungayihlela.
Hlola kuqala iwebhusayithi yakho ngokuziphendulela kubuso bekhompuyutha, kuthebulethi nakuselula.
Dala amaphrojekthi ku-Portfolio noma Behance futhi uvumelanise phakathi kwalokhu okubili.
Inketho yokukhubaza ngokuchofoza kwesokudla ukuvikela izithombe zakho.
Inketho yokunika amandla isethulo se-lightbox sezithombe zakho.
Ipulatifomu isivele inezindikimba ezinhle, ezilungele iselula, eziphendulayo ezifakiwe:
Tags: adobeIphothifoliyo ye-adobeubheduIphothifoliyo eku-inthanethiiphothifoliyoisiza sephothifoliyouhlobo lwekhithi
Izibalo Zokukhula Kwemidiya Yezenhlalo Ngonyaka wezi-2015
Ukukhuphuka Kokumaketha Okususelwa Kubantu Nokukhangisa